Media sosialy sy fahasambarana | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 8, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny taon-dasa, nanoratra lahatsoratra aho Afaka manasitrana ny fahaketrahana ve ny haino aman-jery sosialy?. Toa afaka izany! Androany aho sambatra rehefa namana tsara ary Indianapolis Mobile Marketing guru Adam Small nandefa ahy ity rohy manaraka ity:
Areti-mifindra ao amin'ny tambajotra sosialy ny fahasambarana. Ekipa iray:
Ny fikarohana vaovao dia mampiseho fa amin'ny tambajotra sosialy, ny fahasambarana dia miparitaka amin'ny olona hatramin'ny degre telo nesorina. Midika izany fa rehefa mahatsapa ianao fa faly, ny sakaizan'ny sakaizan'ny sakaiza iray dia mety hanana fahatsapana hafaliana kely kokoa ihany koa.
Hitan'izy ireo fa rehefa misy miala amin'ny [fifohana sigara] dia 36 isan-jato ny fahafahan'ny namana miala amin'ny sigara. Ankoatr'izay, ny antokon'olona izay mety tsy mifankahalala dia nandao ny fifohana sigara tamin'izany fotoana izany, hoy ny mpanoratra tamin'ny lahatsoratr'i New England Journal of Medicine tamin'ny Mey.
Ny fifandraisana ara-tsosialy koa dia misy fiantraikany amin'ny hatavezina. Ny fahafahan'ny olona lasa matavy be dia nitombo 57 isan-jato raha nanana sakaiza lasa matavy loatra izy tao anatin'ny fe-potoana iray, Fowler sy Christakis dia nampiseho tamin'ny taratasy iray tao amin'ny New England Journal of Medicine tamin'ny Jolay 2007.
Ity dia fitaovana matanjaka izay vao nanomboka nahita sy nanararaotra tamin'ny naha mpivarotra azy. Zava-dehibe ny fahatsapana izany fiatraikany izany rehefa manohy mampivoatra ny paikadinao amin'ny Internet ianao. Ho an'ny famakiana fanampiny momba ny fomba efa anovanan'ny mpanjifa ny fitondran-tenany amin'ny alàlan'ny media sosialy, tena tiako ny manolotra ny tatitra momba ny traikefa momba ny varotra ho an'ny mpanjifa an'i Razorfish ho an'ny taona 2008.
8 Desambra 2008 à 10:41
Zarao amin'ny vondrona vaovao ny hafalianao rehetra http://www.smallerindiana.com antsoina hoe “Vaovao mahafaly”! http://www.smallerindiana.com/group/excitingnews
Dec 9, 2008 amin'ny 8: 11 AM
Heveriko fa tsy momba ny namana MySpace ilay fianarana, LOL. Ny "tambajotra sosialy" ho an'ny tanjon'ny fandalinana dia nahitana olona mahafantatra olona mahafantatra olona, ​​anisan'izany i Barbra Streisand.
Mety hisy vokany mitovitovy amin'izany anefa ny hatsaram-panahy kisendrasendra atao amin'ny Internet.
9 Desambra 2008 à 1:26
Hitako hoe aiza no marina ny fianarana ary ahoana no ahafahan'ny media sosialy mampifaly kokoa ny olona. Mazava ho azy fa mifototra amin'ny santionany kely ampiasaina. Mety hisy fiantraikany ratsy ve anefa izany? milalao devoly mpisolo vava fotsiny, fa ny media sosialy dia afaka mamorona ny hevitry ny "namana" raha ny tena izy dia tsy izany. Ny olona dia afaka mandray azy ireo ho matotra loatra ary mamely ny gorodona ao anaty lakaly rehefa mahatsapa fa ireo fifandraisana sy fifandraisana ireo dia an-tserasera tanteraka, fa tsy tena fisakaizana marina.